အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
Posted by kai on Nov 12, 2014 in Editor's Notes | 8 comments
နိုဝင်ဘာ ၄ရက်နေ့တွင် အမေရိကပြည်ထောင်စု၏ ကြားလယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားသလို ၂၀၁၅တွင် မြန်မာ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရှိနေသဖြင့် ယူအက်စ်နိုင်ငံရေးနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ် ဤသူမြင်မိသလို ခြုံ၍ချုံ့ကာရေးပါမည်။
ယခုနှစ်ယူအက်စ်ကြားလယ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲများများရနိုင်ရန်အတွက် ပါတီကြီး၂ခုမှကန်င်ပိန်းများမဲဆွယ်ပွဲများလုပ်ရာတွင် ငွေပုံအောသုံးကြပေရာ ယူအက်စ်သမိုင်းတွင် မရှိစဖူး ၃.၇ဘီလီယံရှိခဲ့သဖြင့် ငွေကစကားပြောလိုက်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဟုအမည်တပ်ရမည်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီက တိုင်းပြည်၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက (၅.၈%)ဖြင့်ကျ၊ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တောက်လျှောက်တက်၊ ဓါတ်ဆီဈေးထိုးကျ၊ ဒေါ်လာငွေ၏ခိုင်မာမှုတို့တက်နေပေရာ ယခုအိုဘားမားအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကွန်ဂရက်၏ငွေပေးဝေထိမ်းကြောင်းမှုတွင် Checks and balances မျှပြီး ကောင်းသောရလဒ်ထွက်လာသည်ဟုသာ တွက်ရမည်။
လွန်ခဲ့သော ၆နှစ်တာအတွင်း အသားအရောင်ရှိသောယူအက်စ်သမ္မတ၏ လူနည်းစုအင်အားသာရှိသောပါတီ(ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်)အပေါ် ညှိနှိုင်းငှဲ့ကွက်ခြင်မရှိ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် အုပ်ချုပ်မှုများသည် ရှေးရိုးစွဲများကို ဒေါသကြီးစွာထွက်စေပေရာ ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်တို့ကသာ စူပါမဂျောရတီ(အင်အားများ/မဲနိုင်)ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် ယူအက်စ်သည် ပြည်တွင်းစစ်များ ပြည်နယ်ခွဲထွက်ခြင်းတို့နှင့်ပင် မျက်မှောက်ပြုရင်ဆိုင်ရမလားဟုပင်ထင်မိပါသည်။
စစ်ပွဲနှင့်စာလျှင် စားပွဲပေါ်ညှိနှိုင်းနိုင်လောက်အောင် မဲနှင့်အနိုင်ပေးတွန်းတင်ပေးလိုက်ခြင်းကသာ ကောင်းသောအဖြေတည်း။
ထိုအဖြေကို ရလဒ်ကောင်းတို့ထပ်ဆင့်ထွက်လာအောင် နောက်ထပ်၂နှစ်ဆောင်ကျဉ်းသွားနိုင်ပါလျှင် ၂၀၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်တို့ ဖက်မှ သမ္မတတက်ရမည်ဖြစ်ပေရာ ဤအတွက်အခွင့်အရေးပေးသည့် မဲဆန္ဒရှင်အမေရိကန်တို့၏ “စမတ်ကျမှု”ကိုသာ ချီးကျူးရန်သာရှိတော့သည်။
လာမည့်၂နှစ်အတွင်း ဖယ်ဒရယ်အစိုးရပိတ်သိမ်းခံရခြင်းနှင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖက်ဦးတည်သွားလျှင်မူ ဟီလာရီကလင်တန်ကို သမ္မတအဖြစ်မြင်ရနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် လမ်းပြမြေပုံ၇ချက်ကို အနှစ်၂၀ကျော်အချိန်ယူ၍ ပြီးအောင်လုပ်သွားပေရာ ယခုမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသည် လမ်းပြမြေပုံပါ ၇ချက်ပြီးမြောက်အခြေအနေဖြစ်လေသည်။ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးများ တာဝန်ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်လေပြီဟုဆိုရန်သာရှိတော့သည်။ ထွက်နိုင်သူများ ထွက်ကြပါလေ၊
မြေပုံအလွန် ၈ချက်မြောက်ကို ပုံဖေါ်လှစ်ပြနိုင်သူများမှာ မည်သူနည်း။ လူထုကိုယ်တိုင်ရေးကြရမည်လား?
နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံ၇ချက်အဆုံးတွင် လက်ရှိသူတို့မည်သို့ဆက်ကြရမည်မသိ ရပ်တန့်သွားလျှက် နိုင်ငံရေးညပ်ကျပ်မှုကြီးနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့နေရသည်။ မြန်မာပြည်၏ပြောင်းလဲမှုအဟုန်ကျလေပြီဟုပင် ထင်လာကြရသည်။
အောက်တိုဘာ ၃၁ရက်နေ့၌ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် မြန်မာခေါင်းဆောင် ၁၄ဦးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစပြုပြခဲ့လေရာ “ရွှေစကား”တို့စလေပြီဟုပင် ပြောလိုပါသည်။ ကောင်းသော ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပင်တည်း။ “လေစကား”မဖြစ်သွားအောင် နောင်တွင်လည်း အဆိုပါဖိတ်ခေါ်မှုမျိုးတို့ စဉ်ဆက်မပြတ်များများလုပ်သွားနိုင်မည် မျှော်လင့်လျှက်တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း..။
Carrot and stick ဆုပေးဒဏ်ပေး
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ပင် ယူအက်စ်အစိုးရမှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ၏ အကြံပေး၊ တောင်သာမြို့နယ်အမတ်ဦးအောင်သောင်းကို Black List တင်သွင်းခြင်းနှင့် နိုဝင်ဘာ ၇ရက်နေ့တွင် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၊ ဥပဒေဌာနမှပြုစုသော မြန်မာစစ်ဖက်ထိပ်တန်းအရာရှိအချို့၏ စစ်ရာဇ၀တ်မှုကျုးလွန်ခြင်း အစီရင်ခံစာထွက်လာကြပေရာ တိုက်ဆိုင်မှုတို့ထပ်သွားသည်ဟုကားမထင်။ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က အာဏာဇောင်းထက်သူ ယခုခေတ်၏ရင်ကြားစေ့ရေးတွင်အနှောင့်အသွားထိုးထည့်နေသူ ဦးအောင်သောင်းကဲ့သို့သော သူများကိုစနစ်တကျမြေလှန်ရှာသတင်းယူ၍ ယူအက်စ်ပါဝါအင်အားဖြင့်တယောက်စီခြွေချပေးနိုင်လျှင်ကား ကောင်းသောမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို အမြန်မြင်ရမည့်သဘောရှိသည်။ ယူအက်စ်၏ မြန်မာအပေါ်ထားသည့်ပေါ်လစီဖြစ်သည့် Carrot and stick ကိုထိရောက်စွာအသက်သွင်းပြခြင်းလည်းမည်ပါလိမ့်မည်။ ” ဒဏ်”မဟုတ်တုံလော။
သို့သော် စစ်ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ်တင်သွင်းသည်မှာက ခြေလှမ်းကျယ်သွားသည်ဟုထင်ပါသည်။ လက်စားချေရေးသည် ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်နေသူများကို ကျောခိုင်းသွားစေနိုင်သည်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ထွက် မြန်မာတချို့ ယခုမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဘေးတွင်ရှိနေသူများနေပေရာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်အစီရင်ခံစာသည် အချက်အလက်တို့အားဖြင့် အမှားများမည်မဟုတ်။
သို့သော် မြန်မာပြည်ကို ယခုအခြေအနေထိရောက်အောင် တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်လာမှုများတွင် လုပ်ခဲ့သူတချို့ကို ကြီးစွာသော ခရက်ဒစ်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆမိပါ၏။
တကယ်တော့ မြန်မာ့လက်ရှိနိုင်ငံရေး ယခုအခြေသို့ (မည်သို့ဆိုစေ)အာဏာရှင်တို့ဖြေလျှော့ပေးမှရခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။ ထိုသူများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တို့ပါဝင်ပါသည်။
ကုန်ကုန်ပြောရလျှင် စစ်တပ်နှင့်သူ၏မိသားစု လူ၁သန်းကျော်ကို ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲမောင်းချနိုင်မည်လော။ လက်တွေ့မဆန်တော့သည့်အတွေးသာဖြစ်သည်။
ဤဖဲကို ပြန်မှောက်ကာ “ဆု” အဖြစ်သုံးသင့်သည်။
အချိုကိစ္စများတွင် ခွင့်လွှတ်ကျေအေးရသည့်သဘောလည်းရှိပါ၏။ သို့ဆိုလျှင် ကွမ်းတရာရေတမှုတ်နှင့်ပန်းပေး တောင်းပန်ခြင်းသည် မြန်မာ့ဓလေ့အရ အရှုံးပေးကာ ငုံ့ခံကြရမည့်သဘောသက်နေပေရာ အရှုံးပေးသူကို ခွင့်လွှတ်ကျေအေးသည်ထက် အနိုင်ယူကလဲ့စားချေခြင်းများရှိလာနေသဖြင့် တောင်းပန်ရမည့်သူများလည်းမတောင်းပန်။ ကျေအေးပေးရမည့်သူများလည်းကျေအေးမရနှင့် “ဓလေ့အကြပ်ဆိုက်”ကာ ရှေ့မဆက်နိုင်ပိတ်မိနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ မြန်မာ့အကျင့်ဓလေ့တို့ကိုပြင်ရပေမည်။ ဤသို့ဖြင့် မြန်မာလူထုမည်မျှ”စမတ်ကျသည်”ကို မြင်ကြရမည့်သဘောရှိပါသည်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးတွင် တပါတီစနစ်မသင့်တော်သလို ၃ပါတီအထက်စနစ်ကလည်း မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်တတ်ပါသည်။
တိုင်းပြုပြည်ပြုအတွက် ၂ပါတီစနစ်ကို ပုံပေါ်အောင်ဖေါ်ဆောင်ကြစေလိုသည်။ အရာရာသည် Yin-Yang၊ ဖို-မ။ မတူကွဲပြားတစုံရှိမှသာ တိုးတက်လွယ်ပါ၏။ အမေရိကားကိုကြည့်လော့၊ ၂ပါတီစနစ်မဟုတ်လော။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင်လုံးလုံးလျှားလျှား ပုံကျဆက်နွယ်နေသော ဘာသာရေးဂိုဏ်းကြီးများ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်ကား ဒီချုပ်ဖက်မှ ဆက်သွယ်စည်းရုံးနိုင်မှုအားနည်းသည်ကိုလည်း မြင်ကြရမည်။
အာဏာကိုချိန်ခွင်လျှာညှိကြလိုလျှင် နိုင်ငံရေးသြဇာရှိသော ဗကပတို့ဘက်နှင့် ရှေးရှေ့နိုင်ငံရေးခေါင်ဆောင်ဟောင်းများ၏ သားသမီးအနွယ်များဖက် စည်းရုံးပူးပေါင်းသင့်သည်။
အစဉ်အလာရှိသည့် ဦးနေ၀င်းမျိုးဆက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှရပေမည်။ တတိယအုပ်စုမရှိစေကြလင့်။
ဒီချုပ်သည် ဒီမိုကရက်ဆန်စွာထား၍ သမဂ္ဂများ၊ ရဟန်းပျိုများ၊ ပညာတတ်များနှင့် အနောက်နိုင်ငံမျှော်ဘက်ရွေ့ယူသင့်ကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးသည် ဘာသာရေးဆရာများနှင့် သူဌေးလက်ဟောင်းကြီးများ။ ကွန်ဆာဗေးတစ်များဖက်ယူနိုင်သည့် ရုရှားနှင့်စိန့်တိုင်းမျှော် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပုံကိုဖေါ်သင့်သည်။
အာရှတွင်မြန်မာသည်အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့ပါသည်။ သမိုင်းကိုကြည့်ပါ။ Agree to disagree ကွဲလွဲခြင်းအားဖြင့်ချစ်ကြည်ကြပါ။ မြန်မာတို့စည်းလုံးကြပါလျှင် အရာရာဖြစ်နိုင်ပါသတည်း။
သူပုန်အသီးသီးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့အပေါ် အစဉ်အဆက်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့သည့်အတွက် တန်ပြန်ဒေါသကို အချိန်မရွေးမြင်ရဖွယ်ရှိပေရာ လက်နက်အင်အားရှိသူမှသာ ညှိနှိုင်းထိမ်းကြောင်းနိုင်မည့်သဘောဖြစ်နေလေသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တို့အား စည်းရုံးမှုမပြုသင့်ပါသလော? တိုင်းမူးတယောက်မျှ ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးတလေမျှ မိမိဖက်တွင်ရပ်တည်ပေးနေခြင်းမဖြစ်သင့်သလော?
စူပါပါဝါ အမေရိကား၏ စစ်အင်အားကို တာဝန်ခံယူ၍ တပ်မတော်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်မပေးသင့်သလော?
စစ်တပ်သည်ကြားနေနိုင်မည်ကားမဟုတ်။ တိုင်းပြည်၏အုပ်ချုပ်ရေးယ​န္တရားတွင် အခြေကျကျပါဝင်နေခဲ့ပြီ။ စစ်ဗိုလ်စစ်သားတို့ ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး၏အုပ်ချုပ်ရေးရာထူးအဆင့်ဆင့်တွင် နှစ်ကာလရှည်စွာဝန်ထမ်းနေကြယုံမက ယုတ်စွ ယဉ်မောင်း၊ တံခါးစောင့်နေရာအထိကျယ်ပြန့်လွှမ်းမိုးခဲ့ပြီ။
ရုရှားနှင့်စိနပြည်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံကြီးများတွင် ဘွဲ့ရများဖြစ်သည်အထိ ပညာတော်သင်ကြားခဲ့ကာ ပညာတတ်ဦးရေထောင်သောင်းချီခဲ့ကြပြီ။
ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတို့တွင်လည်း အခြေကျနေခဲ့ပြီ။ ငွေကြေးကြွယ်ဝသူများလည်းဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်အခဏ်းကဏ္ဍ ဖယ်မရနိုင်တော့။
သမ္မတအိုဘားမားသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင်လောက်အောင် ကမ္ဘာအံ့သြလောက်အောင် မြန်မာပြည်သို့၂နှစ်အတွင်း ၂ခေါက်သွားခဲ့သည်။
အမှန်တကယ်တွင်တော့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သော အာဆီယံတွင်လည်းအဆင်းရဲဆုံးတခုဖြစ်နေသော မြန်မာပြည်အပေါ် အမေရိကန်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအားဖြင့် တိုက်ရိုက် စိတ်ဝင်စားရန်အကြောင်းမရှိ။ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း စိန့်တိုင်းပြည်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟု အတတ်ပြောနိုင်သည်။
စိနပြည်၏ စီးပွားရေးအင်အားမှာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယတန်းရောက်နေယုံမက စူပါပါဝါကို မျက်စပစ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် အမေရိကန်တို့၏ အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတို့ အထွဋ်သို့ရောက်နေသည်ဟုဆိုရမည်။ မြန်မာပြည်ဟူသည် အမေရိကန်တို့ စိနပြည်ကို ထိမ်းချုပ်ကိုင်တွယ်ရန် ကြားခံကစားသည့်အဆင့်သာလျှင်ရှိနေသေးသည်ဟူလို။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးတွင် ပြာပုံဘ၀မှ ဂျပန်ပြည်သည် အမေရိကားကိုမှီခိုတွယ်တက်၍ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ စိန့်တိုင်းပြည်သည်လည်း ဤလမ်းမြင်ကာ ထွင်၍လိုက်ခဲ့ပြီ။
မြန်မာတို့ အခွင့်အရေးရလျှင် ရသလိုဆုပ်ကိုင်ကာ ဂျပန်နှင့်စိန့်တိုင်းကို အတုယူကာပြုသင့်သည်။ “အချက်”ပေါ်လျှင်အမိအရဆုပ်ကိုင်ယူကာ မိမိတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာ၍ အမျိုးသားကြီးပွားရေးသာတစိုက်မတ်မတ်လုပ်သွားသင့်သည်။
အချက်ပေါ်နေပြီမဟုတ်ပါလော? ချမ်းသာကာ အာဏာအင်အားရှိသည့်စူပါပါဝါနှင့်ချိပ်ဆက်မှီခိုခြင်းအားဖြင့် နိမ့်ကျသွားခြင်းဟူသည်မရှိစကောင်း။
အမေရိကန်တို့၏ မဟာဗျုဟာကျကျ စဉ်စားကိုင်တွယ်ခံရသောနေရာရောက်လျှင် ရောက်သူနိုင်ငံတိုင်းအထူးကြီးစွာ သတိထားသင့်သည်ကား အမှန်။ ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယား၊ အာရပ်နွေဦးတို့ကြောင့်အစိတ်စိတ်ကွဲနေသည့် အာရပ်နိုင်ငံများက သမိုင်းပုံရိပ်အဖြစ်ပြနေသည်။
တဖက်သို့အကပ်ကြမ်းပါလျှင် စူပါပါဝါနေရာကို လှမ်းလာသည့် မြန်မာအိမ်နီးချင်း စိနပြည်နှင့်ငြိတိုက်တွန်းပြတ်ကာ တိုင်းပြည်အစိတ်စိတ်ဖြစ်သွားမည်အရေးကိုလည်း တွေးပူသင့်လှပေသည်။ ကမ္ဘာတန်းအဆင်းမှီ နိုင်ငံရေးသမားများ၏အကြံဥာဏ်နှင့်ဦးဆောင်မှုနောက်သို့ မြန်မာလူထု ပုံ၍စုံမှိတ်လိုက်သင့်သည်။
ယခင်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များမှ လူထုအပေါ်တောင်းပန်ခြင်းတို့ပြုကာ လွှတ်တော်မှလည်းကျေအေးခြင်းပြုသင့်သည်။ ၀န်ချတောင်းပန်သူသည် သိက္ခာရှိ မြင့်မြတ်ပါ၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်မှ မြန်မာပြည်၏အခြေခံအဆောက်အအုံများအပေါ် ထိရောက်သောအကူအညီများပေးကြပါရန် အမေရိကပြည်ထောင်စုအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ တောင်းဆိုသင့်သည်ထင်ပါသည်။ ယခုလိုခေတ်တွင် အတောင်းကောင်းသူ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ပါ၏။ တိုင်းပြည်ပြောင်းအောင်တောင်းပေးနိုင်သူ လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါ၏။
မြန်မာပြည်သည် ပြည်ပအကူအညီများစွာလိုနေသည်။ သယံဇာတတို့ကုန်နေပါပြီ၊ ခေတ်ပြောင်းမင်းလွဲ လမ်းဆုံခွရောက်အရေးကြီးချိန်ဖြစ်သည်။
ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်း၌မရှိ၊ အမှီရှိမှသာ တိုးတက်လာမည့် အဖမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို နောင်မျိုးဆက်တခုလောက်တွင်မြင်ကြရမည့်သဘောရှိသည်။
ဒီတခေါက်လဲ ကြိုက်သေးတာပဲ… တဂျီးတောင် ရေးတတ်နေပြီ… လူကြိုက်… ဟီး…
တကယ်ပြောတာပါ.. တဂျီး… ရှေ့တလရော.. ခုတလရော.. သုံးသပ်ချက် ထင်မြင်ချက် တော်တော်တိုက်ဆိုင်ပါတယ်…
ဒီတခါမှာ ဒေါ်စုရဲ့ ရင်ကြားစေ့စကားကို ၁ပါတ်လှည့်ပြီး.. ထောက်ခံရေးထားပါတယ်။
ဒေါ်စုဟာ.. ဦးအောင်သောင်းကိစ္စကို ဖြေရာမှာ.. တော်တော်ပါးနပ်တယ်လို့မြင်မိတယ်..။
ဒေါ်စုဘာလုပ်နေတယ် မရိပ်မိနိုင်ပဲ.. ကိုးလို့ကန့်လန့်ထွက်ကုန်တာက…. လူထုပဲ..။ တခြားဒီမိုကရေစီေ၇းလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲ..လို့.. ယူဆမိကြောင်း..။
ယူအက်စ်အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆိုင်တဲ့ ငွေမဲဆရာကြီး ဦးအောင်သောင်း ကိစ္စမျိုးတွေကို ဆက်လုပ်ရမယ်လို့ရေးထားပေမယ်.. စစ်ရာဇ၀တ်သားဖြစ်ပြီး.. ဘန်ကောက်ထွက်တာနဲ့အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ကိစ္စတော့.. ဖဲအဖြစ်သုံးအောင် အင်္ကြပြုထားလိုက်တယ်…။
စစ်ရာဇ၀တ်မှုကိစ္စဟာ.. ယူအက်စ်အစိုးရနဲ့မဆိုင်ပါ..။ ICC (International Criminal Court ) ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်..။
ဦးအောင်သောင်းလိုအမှုမှာ.. သာမန်အားဖြင့် ယူအက်စ်ကနေ.. ကာယကံရှင်လူကို ထောင်ထဲထည့်အရေးမယူပါ…။ ငွေကို ဖမ်းထိန်းလိုက်သာတာဖြစ်ပါတယ်…။ သိမ်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါ။
စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ကိစ္စမျိုးကတော့..ICC ကတဆင့်.. ထောင်ထဲဖမ်းထည့်လို့ရပါကြောင်း..။
ကြုံလို့ပြောရရင်.. ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဥပဒေကျောင်းက.. အိုဘားမားရဲ့ကျောင်းဖြစ်ကြောင်း..။
November 07, 2014 RSS
ဦးအောင်သောင်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆုိ့ခံရတာ NLD ပါတီရဲ့ ပရောဂ မကင်းဘူးဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ အန်တီတို့က ဒီကိစ္စဖြစ်တာ။
တိုင်ပင်ပြီး လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့လည်း ဒီလိုဟာမျိုးတွေ ဟာ ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး သွားဖို့လုပ်နေတဲ့
အချိန်မှာ နောက်ကြောင်းပြန်တာတွေကိုလည်း အန်တီတို့က သိပ်ပြီးတော့
ဒါဟာ ဘယ်သူကိုမှလည်း အကျိုးမပြုဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့
အချိန်မှာ တချိန်တခါတုန်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေတောင်မှ အဆင်ပြေအောင် လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ
ဒါတွေလုပ်တာဟာ နိုင်ငံကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်မလဲ။
အဲဒါကိုကြည့်ရမှာ။ အဲဒီတော့ ဒါက… NLD နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။
အန်တီတို့ကလည်း မသိဘူး။ သူတို့ထုတ်ပြန်ပြီးမှပဲ အန်တီတို့က သိတာ။
အစောကတည်းက ပြောပြီးသားပဲ။ ကလဲ့စားချေဖို့လည်း မရှိဘူး။ ကလဲ့စားချေဖို့က အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ရင်ကြားစေ့ဖို့က အဓိက။
တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမှာက ရင်ကြားစေ့ရေးက အဓိက။ ကလဲ့စားချေရေး မဟုတ်ဘူး။
နောက်မျိုးဆက်မှာ တိုးတက်တဲ့ အဖမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမြင်ရနိုးနဲ့။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အမေရိကန်မှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါ သိပ်ပြီးတော့ လူသူလေးစား အထင်ကြီးတဲ့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကြီးက ပညာရှင်တွေက အစီရင်ခံစားတစ်ခု ရေးသားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၃) ယောက်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ် (၃) ယောက်ဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လူသားတို့အပေါ်မှာ ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုတွေလည်း ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး ICC ကို တင်နိုင်တဲ့ အထောက်အထားတောင် သူတို့မှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီတွေ့ရှိချက်ဟာ ဒီအစီရင်ခံစာဟာ အိုဘားမားအစိုးရရဲ့  မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားအပေါ် တစုံတရာ ရိုက်ခတ်မှု ရှိနိုင်ပါလား။ အိုဘားမား က ဒီကိစ္စကို ပံ့ပိုးပေးမလား။ သို့တည်းမဟုတ်..
Prof. Steinberg ။ ။ ဒီကိစ္စအပေါ် အမေရိကန်အစိုးရရဲ့  တရားဝင်ရပ်တည်ချက်ကိုတော့ ကျနော် မသိပါဘူး။ ဒီ စစ်ဗိုလ်တွေ ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားလည်း ကျနော်မှာ မရှိပါဘူး။ ဟားဗတ်ပါမောက္ခတွေရဲ့  အစီရင်ခံစာကို ကျနော် တွေ့ပါတယ်။ ကျနော်အနေနဲ့ ပြောရရင် အမေရိကန်အစိုးရက လူ့အခွင့်အရေးကို အထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စဟာ အမေရိကန်ရဲ့  နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကျောရိုးမူဝါဒပါ။ အဲဒီ မူဝါဒကို ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကျိုးကို ငဲ့ကွက်ပြီးတော့ တခြားအချက်တွေနဲ့ ထိန်းညှိရပါတယ်။ အစိုးရတရပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်။ အာဏာလက်ရှိထဲက တချို့ ကို ရာထူးစွန့်လွှတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ထောင်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်သင့်ပါ့မလား။ မှတ်မိပါလိမ့်မယ် ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင် က Nuremberg ခုံရုံးမျိုး မရှိနိုင်ပါဘူးလို့ ပြောတာပါ။ ဒါကိုတောင်မှ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ကြောက်လန့်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပစ်ပယ်လိုက်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ ဒါဟာလဲ အချက်တချက်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာခုံရုံး တင်ခံရမှာကို သူတို့ ကြောက်ပါတယ်။ နောက်တခုက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ပြည်ပကို ထွက်ကြမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်း သူတို့ကို အရေးယူဖို့လုပ်တာ ပြည်တွင်းရေး ဝင်စွက်တယ်လို့ပဲ ပြောကြမှာပါ။ ချီလီကိစ္စနဲ့ မတူပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့က လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့အကြပ်အတည်းနဲ့ ပြန်ညှိရပါလိမ့်မယ်။
ပါမောက္ခ David Steinberg ဦးကျော်ဇံသာ
သူပြောတဲ့အထဲမှာ ဒီ အိုင်ဒီယာကိုတော့ ကြိုက်တယ်
အနည်းဆုံးတော့ အတွေးခေါ်တခုလောက် တော့ အဲ့ခေါင်းတွေထဲ ထည့်ပေးနိုင်ရင်ကို မဆိုးဘူး
မသိတာထက်စာရင် သိသွားတာတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့
သိသိကြီးနဲ့လုပ်နေတာပါဆိုရင် ပြီးကြပါလေရော :((
Prof. Steinberg ။ ။ ကျနော် ပြောမယ်ဗျာ။ လူတစ်ယောက် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်လို့ ထောင်ချထားတယ် ဆိုပါစို့။ ဒီလူကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ ထောင်က လွတ်လာတဲ့အထိ စောင့်နေမလား။ ထောင်ကျနေဆဲမှာပဲ ပြုပြင်သွားမလား ဆိုတာပါ။ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုတာလဲ အခုအချိန်မှာ စတင်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ နိုင်ထက်စီးနှင်းလုပ်မယ့် လူသတ်လက်နက်တွေကို မပေးဘဲနဲ့ တခြားဘက်တွေမှာ လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိစ္စ။ အေးချမ်းသာယာရေး ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စတွေကို လေ့ကျင့်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပါ ဒီကိစ္စအတွက် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ (National Convention) ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ရေးမှာပဲ။ အဲဒီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းပြီးရင်၊ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့က အတည်ပြုမယ်။ အတည်ပြုပြီးရင် အဲဒီဥပဒေအရ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရသည် နိုင်ငံတော်ကို ဦးဆောင်သွားမှာပဲ။ အဲဒီအစိုးရသည် ဒါ အရပ်သားအစိုးရပေါ့ဗျာ။ သဘောကတော့ တပ်မတော်အစိုးရတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အရပ်သားအစိုးရပဲ။ သို့သော်ငြားလည်း အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ တပ်မတော်ကတော့ အခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ရမယ်။
တပ်မတော်က၀င်ပြီး တက်ပြီးတော့မှ ချုပ်ကိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ မရအောင်လို့ တပ်မတော်က အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ (National Convention) ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတာပေါ့။ လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ အခု ပထမပိုင်းမှာ အဲဒီ (National Convention) မှာ ကျွန်တော်တို့ (Consensus) ပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချက်တွေ။ ဘာတွေလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့ အခြေခံမူတွေပေါ့။ အခြေခံမူတွေကို ကျွန်တော်တို့က ရတယ်။
အဲဒီအခြေအနေတွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုရင် ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို ကျင့်သုံးရန်၊ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုစနစ်ပဲ ဆက်ပြီးကျင့်သုံးမယ်။ လက်ရှိ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ ခု အတိုင်း ဒေသကြီးများကို ဆက်လက်ထားရှိမည်။ အမည်တွေကို လက်ရှိအတိုင်း ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရန်၊ စောစောတုန်းက ကျွန်တော်တို့က အမည်၊ နာမည်တွေကို ပြောင်းဖို့၊ နာမည်ပြောင်းဖို့ ကျွန်တော်တို့က စဉ်းစားပေးတယ်၊ ဆွေးနွေးကြည့်တယ်။ အများစုက လက်မခံနိုင်တာနဲ့ လက်ရှိအခေါ်အဝေါ်အတိုင်းပဲ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ ဆုံးဖြတ်တယ်။
နောက် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဖြစ်ရမယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်စနစ် မဟုတ်ဘူး။ သမ္မတ စနစ်နဲ့ သွားမယ်။ သမ္မတဆိုတာမှာ ဟိုးမြန်မာနိုင်ငံ စောစောပိုင်းတုန်းက သမ္မတမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ စောစောက သမ္မတက ရုပ်ပြသမ္မတ၊ ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ သမ္မတဆိုတာ ပုဆိုးဝတ်တတ်ရမယ်၊ မြင်းစီး တတ်ရမယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုး။ ဟုတ်တယ်မို့လား၊ အဲဒီ သမ္မတမျိုး မဟုတ်ဘူး။ တကယ့် အာဏာအပြည့်အ၀ရှိတဲ့ သမ္မတ။ သမ္မတက တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားရမယ်၊ ဦးဆောင်သွားရမယ်။
နောက် နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာ ခက်မသုံးဖြာဖြစ်တဲ့ ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေး အာဏာတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ ပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနဲ့ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းခြင်း ဖြစ်စေရန်။ နောက်တစ်ချက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ လူဦးရေကိုအခြေခံ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးများနဲ့ ပြည်နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ တူညီစွာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်၊ ပေါင်း နှစ်ရပ်ထားရှိရန်။ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် လွှတ်တော် ၁၄ ခု ထားရှိရန်၊ နော်။ တိုင်းနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်း သူ့ဟာသူ ဒီ လွှတ်တော်တွေ ရှိမယ်။ အဲဒီမှာ တိုင်းနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ပေါင်း ၁၄ ခု ရှိတာကိုး။ အဲဒီမှာ လွှတ်တော်အနေနဲ့ ၁၄ ခု ရှိမယ်။ အဲဒီ လွှတ်တော် ၁၄ ခုမှာ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေ ခွဲဝေပေးထားမယ်။
နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှာ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ သတ်မှတ်တဲ့ဦးရေအတိုင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ရန်။ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေက တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းတဲ့လူတွေ ထည့်ပေးရမယ်။ ရွေးချယ်ပြီးတော့ ပေးစရာမလိုဘူး။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နေပြီးတော့မှ အမည်စာရင်းနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ပေးတဲ့လူကို အဲဒီထဲမှာ ထည့်ပေးရမယ်။
နောက် ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုနဲ့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတို့တွင် ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ နယ်စပ်အုပ်ချုပ်ရေး စတဲ့ တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရန် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားများ ပါဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ရန်။ စောစောက ပြောတဲ့ တိုင်းနဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာလည်း တပ်မတော်သားအရာရှိ အမည်စာရင်း ပေးထားတဲ့လူတွေ ပါရမယ်။ အောက်တစ်ဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေမှာလည်း တပ်မတော်က အရာရှိတွေ ပါရမယ်။ အဲဒါတွေကတော့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်း သတ်မှတ်ပေးတဲ့လူကို ထည့်ပေးရမယ်။
တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးတို့တွင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိစေရန်၊ တပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့ ထည့်ပေးထားတာ။ နောက် ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တပ်မတော်တွင် အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟု မုချမှတ်ရန်၊ တပ်မတော်သည် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စအားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲ စီရင်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိစေရန်။ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဘေးကနေ စွက်ဖက်လာမှာစိုးလို့၊ ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ ရာထူးခန့်ထားရေးကိစ္စ ဘေးကစွက်ဖက်လို့ မရဘူး။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အစီအမံနဲ့ပဲ ရာထူးခန့်ထားရေး၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘေးကနေပြီး သမ္မတကနေပြီးမှ ဟာ ဒါလုပ်ပေးပါ မရဘူး။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အစီအမံနဲ့ပဲ လုပ်ခွင့်ရှိရမယ်။ အဲဒါ ထည့်ထားတယ်။
နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်ရမယ်။ တချို့အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာဆိုရင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို သူက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံးရဲ့ အကြီးအကဲလို့ မထားဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့ အကြီးအကဲဆိုပြီး တချို့အစိုးရတွေမှာ ဒီလိုပေးထားတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်က ကိုင်ထားတယ်။ တချို့ သမ္မတက ကိုင်ထားတယ်။ အခု ဒီမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အကြီးအကဲပဲ။
နောက် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲစေမည့်၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲစေမည့် သို့မဟုတ် အချုပ်အခြာအာဏာ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေမည့် အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်လျှင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို အခြေခံဥပဒေ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များနဲ့ အညီ ရယူသုံးစွဲခွင့် ရှိရမည်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့မရဘူး။ တိုင်းပြည် ဖရိုဖရဲဖြစ်တော့မယ့်ဟာမျိုး၊ တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမယ့် အခြေအနေမျိုးရောက်ရင်တော့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကနေ ၀င်ပြီးတော့မှ ဒါတိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ ထည့်ထားတာ။
နောက် အာဏာသုံးရပ်ကို ဗဟိုနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ခွဲဝေကျင့်သုံးရန်။ ထူးခြားသည့် လူမျိုးစုရှိသည့် ဒေသတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဧရိယာများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်။ ထူးခြားသည့် လူမျိုးစုဒေသ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သိတာပဲ။ ၀ ကလဲ ပြည်နယ်တောင်းနေတာပဲ။ ပေးလို့မရဘူးလေ၊ ၀ ပြည်နယ် ပေးလိုက်ရင် ရှမ်းက ဘယ်နေမလဲ၊ ရှမ်းထဲက ခွဲပေးလိုက်ရမှာကို၊ ဟုတ်ဖူးလား။ အဲဒီတော့ ၀ ပေးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့လူတွေကလည်း တစ်ခါထပ်ပြီး တောင်းဦးမှာပဲ။ ကိုးကန့်ကလည်း နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုးကန့်ကလည်း တောင်းမှာပဲ၊ အဲဒီတော့ ဘယ်သူ့မှ မပေးဘူးလေ၊ သို့သော်ငြားလည်း ပြည်နယ်တော့ ခွဲမပေးဘူး၊ သို့သော်ငြားလည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဧရိယာအဖြစ်တော့ သတ်မှတ်ပေးမယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဧရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့ပဲ တွက်ရမယ်။ သတ်မှတ်တဲ့လူဦးရေထက် ပြည့်ဝရင်တော့ သူ့ကို သူ့အဆင့်အတန်းနဲ့ အညီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်၊ ဒီလို ကျွန်တော်တို့က သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ထည့်ထားတယ်။
စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြည်သူပိုင် မသိမ်းရန်၊ ငွေစက္ကူများကို တရားမ၀င်ကြေညာခြင်း မပြုလုပ်ရန် ဆိုပြီးတော့ အဲဒီလို အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေ ကျွန်တော်တို့က ထည့်ထားတယ်။ သဘောကတော့ တပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ တော်တော်များများ ကျွန်တော်တို့က ထည့်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ခင်ဗျားတို့ အခန်းကဏ္ဍသည် နောင်မှာ သိပ်ပြီးတော့ အရေးပါ လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကြီးပြီ၊ ကျွန်တော်တို့က သွားတော့မှာ၊ ခင်ဗျားတို့ပဲ ကျန်မယ်။
P.S.နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်၊ အရာရှိကြီးများ အုပ်ချုပ်မှုမွမ်းမံသင်တန်း (၃/၉၃)၊
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်၏ ဟောပြောပို့ချချက်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
ကြီးကြီး မကြီးကြီး မြန်မြန်သွားကြလေ ကောင်းလေပါဘဲ